Afghanistan - Kaalmo Helitaan Caalami ah
Waxaan ka shaqeyneynay Afgaanistaan ​​ilaa 2002. Kooxdayada waxaa hogaaminaya Maareeye Laftiran oo cajiib ah oo ku xeel dheer arrimaha bulshada iyo dabeecadda is-beddelka isgaarsiinta, sheeko-sheegashada, iyo waxbarashada gabdhaha, oo aqoon dheer u leh jawiga adag ee Afghanistan.
Annagoo joogna gobol kasta oo Afgaanistaan ​​ah, waxaan leenahay shaqaale balaaran iyo iskaashi adag oo aan la leenahay in ka badan 72 idaacadood. Waxaan sidoo kale wada shaqeyn la leenahay Sesame Garden, waxaan u horseedaa barnaamijyo wax looga qabanayo xuquuqaha haweenka ee islaamka, waxbarashada, caafimaadka, haajirida, xuquuqda cod bixiyaha, ka qeyb qaadashada bulshada, latalinta arrimaha bulshada, kahortaga mukhaadaraadka, barnaamijyada awoodsiinta dhalinyarada, xasilinta bulshada, iyo kahortaga iyo ka hortaga xagjirnimada rabshadaha wata.
Waxaa intaa dheer in our saxeexyo soo dhowaanaya, waxaan isku dhafanaa qaabab dhaqameed dhaqameed sida Shuras (isu imaatinka bulshada) iyo masraxa mobilada. Waxaan ku faraxsanahay inaan haysano koox boqolkiiba 100 ah oo maxali ah oo ku sugan Afghanistan kuwaas oo hamigooda iyo ka go'naanshahooda ay gacan ka geystaan ​​isbadal waara.
Xuquuqda Aadanaha iyo Islaamku waxay inta badan isku khilaafsanaayeen Afgaanistaan. EAI waxay qaadatay barnaamij laba sano soconaya oo jaaliyadaha ah si ay tallaabo uga qaaddo xuquuqda aadanaha iyo arrimaha la xiriira dulqaadka ee lixda gobol ee Afghanistan. 2008-2010
Afganistaan ​​Dulqaadashada Caravan
Riwaayad raadiye ayaa dhiirrigelinaysa wada hadalka ku saabsan nidaamka dhicitaanka ee Afghanistan
Afgaanistaan, barnaamijka Raadiyaha caanka ah ee One Village, Kun Kun Voices wuxuu siinayaa bulshooyinka maxalliga ah inay doortaan qaab cusub oo nololeed oo ka baxsan nidaamka lacag-la'aanta.
Safarka haweeneyda reer Afgaanistaan ​​ee ka socota geeska hore ee safka hore: la kulan wacyigeliyaha bulshada
Zahra Mosaiby waxay ogtahay inay tahay waqtigeedii inay badali lahayd caqiidadeeda xaddidan markay maqashay ereyga “Community Mobilizer.”
Ka taageer EAI sii wadista ka shaqeynta mid ka mid ah deegaannada ugu adag in lagu gudbo nabadda, dulqaadka, waxbarashada iyo sinnaanta
Xuquuqda daabacaadda Xuquuqda 2019